Top 10 fizarana Linux maivana ho an'ny solosaina tranainy | Vaovao momba ny gadget
Fitsinjarana Linux maivana
Na eo aza ny tombony atolotry ny rafitra fiasa mifototra amin'ny Linux, ankehitriny dia sarotra be ny mahita fitaovana niloka an-jambany tamin'io. Taona vitsy lasa izay, Mozilla dia niasa tamina tetik'asa hamoahana rafitra fiasa mifototra amin'ny Linux ho an'ny finday avo lenta, saingy navelan'ireo sehatra nanohana azy voalohany io tetikasa io hahita izany tsy nanan-toerana teo amin'ny tontolo iainana ecosystem, izay iOS sy Android no mpanjaka.
Linux dia niavaka hatrany tamin'ny fampifanarahana ny saika amin'ny milina rehetra, raha ny tena izy dia afaka mahita fizarana be dia be eny an-tsena isika isan-karazany amin'ny karazana solosaina, na firy taona na tsy misy pirinty. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny 10 amin'ireo fizarana Linux tsara indrindra ho an'ny solosaina taloha.
Ao amin'ity lisitra ity dia tsy misy ny, na misy azy ireo koa, koa raha te-handray anjara amin'ny anjara birikinao ianao dia asaina ianao hanao izany amin'ny hevitr'ity lahatsoratra ity. Ireo disto rehetra izay hasiako tsipiriany etsy ambany Izy ireo dia baiko arakaraka ny fepetra takiana farafahakeliny an'ny tsirairay, mba hahamora kokoa ny fitadiavana izay mety hanana toerana tsara kokoa ao amin'ny solosainantsika taloha, ilay eo an-tampon'ilay lalimoara, na ao amin'ny efitrano fitahirizana satria azafady fa nariana izahay.
1.1 Fepetra takina Linux Puppy
2.1 Fepetra Knomix
3.1 Fepetra takiana amin'ny porteus
4.1 TinyCore takiana
5.1 Fepetran'ny AntiX farafahakeliny
6.1 Fepetra lubuntu
7.1 Fepetra takiana Xubuntu
8 OS OS / Clementine OS
8.1 Ny fepetra takiana amin'ny OS OS
9.1 Fepetran'ny OS Elementary
10.1 Linux Lite takiana
Puppy Linux dia iray amin'ireo fizarana izay mitaky loharanon-karena kely indrindra mba hiasa tsara. Manolotra anay tontolo manodidina ny birao, fampiharana marobe efa napetraka mialoha ankoatry ny fananana tranokala ofisialy hamahana ny karazana fisalasalana amin'ny alàlan'ny fiasa na ny fametrahana azy. Izy io koa dia ahafahantsika manomboka ny PC amin'ny CD na pendrive, ankoatry ny fahafahantsika mametraka azy mivantana amin'ny kapila mangirana ao amin'ny solosaintsika. Ny kinova farany puppy Linux izay misy dia 6.3.
Fepetra takina Linux Puppy
486 processeur na avo kokoa.
RAM 64 MB, soso-kevitra 512 MB
Sintomy Puppy Linux
KNOPPIX dia fanangonana rindrambaiko GNU / Linux, mihazakazaka amin'ny CD, DVD na USB drive. Tadiavo ho azy ary mifanentana amin'ireo karazana adaptatera sary, kara-peo, fitaovana USB ary fitaovana hafa manodidina. Tsy mila mametraka na inona na inona amin'ny kapila mafy ianao. Ity kinova ity dia manome antsika rindranasa marobe ahitantsika ny GIMP, LibreOffice, Firefox, mpitendry mozika ...
RAM 120 MB, 512 no atolotra raha miasa miaraka amina fampiharana maromaro isika.
Ampidino ny Knomix
Miaraka amin'ny 300 MB fotsiny, Portus dia mamela antsika hisafidy ireo tontolo sary marobe toa ny MATE, Xfce, KDE… Ny kinova voalohany an'ny Porteus dia nantsoina hoe Slax Remix, mety ho fantatrao kokoa io anarana io. Mety ho an'ny solosaina antenatenan'ny taona 90 noho ny ambany takiana ilainy. Ny kinova farany misy dia ny laharana 3.2.2 izay navoaka tamin'ny Desambra tamin'ny taon-dasa.
Fepetra takiana amin'ny porteus
256 MB ny tontolon'ny sary RAM - 40 MB amin'ny maody an-tsoratra
Tinycore dia fizarana iray izay mampiasa kernel Linux sy ireo fanitarana noforonin'ny fiarahamonina. Manolotra antsika tontolo iainana sary sy tsy atolotra ho an'ireo mpampiasa te hiditra amin'ny Linux, satria somary sarotra kokoa noho ny mahazatra ny fametrahana azy. Mandritra ny fizotry ny fametrahana dia azontsika atao ny misafidy izay rindranasa tiana hapetraka ary iza no tsy. Saingy io safidy io dia midika fa raha ny tena izy dia tsy misy browser na fanodin-teny. Na dia mety manondro fomba hafa aza ny anarany, TinyCore dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa rehetra izay te-hampanjifa ny endriny Linux faran'izay betsaka.
486 mpanamboatra DX
Sintomy ny TinyCore
AntiX dia iray hafa amin'ny fizarana Linux izay mitaky fepetra vitsy, na izy roan amin'ny resaka processeur toy ny amin'ny RAM, mba hahafahantsika mametraka azy amin'ny ankamaroan'ny solosaina amin'ny faramparan'ny taona 90. Ny AntiX dia misy amin'ny alàlan'ny fampiharana efa napetraka mialoha ny biraon'ny birao LibreOffice, ny navigateur Iceweasol, ny mpanjifan'ny mailaka Claws ... fampiharana izay ahafahantsika miasa amin'ny birao miorina amin'ny GNOME antsoina hoe IceWM.
Fepetran'ny AntiX farafahakeliny
RAM 64MB, tolo-kevitra 128MB.
Sintomy ny AntiX
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka an'i Lubuntu ho fizarana tsara indrindra amin'ny solosaina tsy dia matanjaka dia hita fa ny fanavaozana dia miaraka amin'i Ubuntu, satria Tena Ubuntu misy tontolon'ny birao LXDE natao ho an'ny solosaina loharano ambany. Misaotra ny vondrom-piarahamonina ao ambadiky ny Ubuntu, tsy hanana olana velively amin'ny lafiny fanohanana, fanavaozana, loharano, fampiharana ... Azo ampiasaina amin'ny solosaina 32 sy 64 bit.
Pentium II, Pentium III no atolotra
192 MB amin'ny RAM
Sintomy ny Lubuntu
Tsy afaka nanonona an'i Lubuntu izahay ary nanadino ny momba ny zokiny lahy, Xubuntu, fizarana Ubuntu miaraka amin'ny tontolon'ny birao Xfce. Tsy toy ny Lubuntu anao, Ny fepetra Xubuntu dia somary avo kokoa, saingy mbola mety tsara ho an'ny solosaina tsy manana loharanom-pahalalana firy.
Fepetra takiana Xubuntu
Pentium III, Pentium IV natolotra
Hafainganana amin'ny processeur: 800 MHz
4 GB ny habaka amin'ny kapila mafy.
OS OS / Clementine OS
Tsy mitovy ny fizarana Linux rehetra. Manolotra antsika i Pear OS estetika mitovy amin'ny hita ao amin'ny rafitra fiasan'ny macOS Apple. Mampalahelo fa mandritra ny taona vitsivitsy dia tsy hitantsika amin'ny fomba ofisialy ireo fizarana ireo halefa, noho izany mila mijery mpizara hafa izahay. Ny fametrahana dia azo atao amin'ny CD, DVD na pendrive.
Ny fepetra takiana amin'ny OS OS
Kapila mafy 8 GB
Ny iray amin'ireo distro izay nahazo laza malaza tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny Elementary noho ny loharanom-bola ambany takiny, na dia tsy azontsika apetraka amin'ny solosaina aza ny faramparan'ny taona 90, fa amin'ireo izay manodidina ny 10 taona ankehitriny tsy misy olana. Ny interface interface dia mitovy amin'ny macOS, koa raha mitady ianao mpisolo ny OS OS Clementine na OS Clementine io no vahaolana arosonao.
Fepetran'ny OS Elementary
1 GHz x86 processeur
5 GB amin'ny habaka kapila mafy
Mpamaky seranana CD, DVD na USB hametrahana azy.
Sintomy ny Elementary OS
Ny Linux Lite dia miorina amin'ny Ubuntu ary manana fampiharana be mpampiasa indrindra toy ny browser Firefox, Libre Office, ny mpilalao VLC, ny editor GIMP, ny client mail an'ny Thunderbird ... Hampahatsiahy antsika ny interface ilay tontolo sary. an'ny Windows XP na raha efa mpampiasa an'ity kinova Windows ity ianao dia tsy ho lafo aminao ny mampifanaraka haingana. dia azo alaina solosaina 32-bit sy 64-bit.
Linux Lite takiana
Sary 1.024 768 x XNUMX
Sintomy ny Linux Lite
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Fitsinjarana Linux maivana
Misaotra tamin'ny fampahalalana, vita tsara
Ity divay ity dia tsy hiteraka aretin'andoha na tsy mahazo aina rehefa mandany azy
Mandinika amin'ny antsipiriany ny iPhone 8 Plus vaovao izahay